Kenya : Maty i Echo, Ilay Reniben’ny Elefanta Ao Amboseli · Global Voices teny Malagasy
Kenya : Maty i Echo, Ilay Reniben'ny Elefanta Ao Amboseli
Voadika ny 24 Jolay 2017 17:48 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Español, Français, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
Tsy ho hadinoina i Écho .
Maty i Écho, ilay reniben'ny elefanta ao amin'ny Valan-javaboarin'ny Amboseli izay malaza eto amin'izao tontolo izao, araka ny fiheveran'ny Amboseli Trust for Elephants (ATE) azy dia noho ny fahanterany sy ny vokatry ny haintany izay namely ity valan-javaboary any amin'ny faritra atsimon'i Kenya ity nandritra ny telo taona ary nahitana tsy fahampian-tsakafo no nahatonga izany.
Maty tamin'ny 2 ora tolakandro i Echo ny 3 May 2009. Nidaraboka izy ny andro talohan'izay, ny asabotsy maraina, ary nivalapatra teo amin'ny tany nandritra ny efatra ambiroampolo ora mahery, tsy nahavita nitsangana intsony talohan'ny nahafatesany. ” Nijanona teo anilany hatramin'ny farany i Katito sy Robert, ao amin'ny ATE” hoy i Cynthia Moss ao amin'ny WildlifeDirect tamin'ny 4 May. Nanao fanentanana fanangonam-bola tany Etazonia i Cynthia Moss tamin'izay fotoana izay. Najanony ny diany tany Etazonia ary niverina tany Kenya izy hamonjy ireo mpiasa ao amin'ny ATE, ketraky ny vaovao ,sy hijery ny fianakavian'i Echo miatrika ity voina ity.
Rehefa nahita an'i Echo voalohany i Cynthia Moss tamin'ny taona 1973, niisa 7 ny fianakavian'ity elefanta ity tamin'izay fotoana izay. Tamin'ny andro nahafatesany, 36 taona tatỳ aoriana, Echo no reniben'ny fianakavian'ny elefanta miisa 40 izay mihinam-bilona ao amin'ny lemaka Amboseli ao ambadik'i Kilimanjaro .
Echo angamba no elefanta malaza indrindra eto amin'izao tontolo izao, rehefa avy niseho tao anatin'ny fanadihadiana maro samihafa. Ny fanadihadiana tena nalaza indrindra izay nisehoany voalohany dia ilay hoe, Echo of the Elephants tamin'ny taona 1993, izay novokarin'ny sampan-draharahan'ny tantaran'ny natiora ao amin'ny BBC, sy ahitana ny fanehoan-kevitr'ilay manam-pahaizana erantany momba ny elefanta, Cynthia Moss, miaraka amin'ilay mpanatontosa Martyn Colbeck ao amin'ny BBC ao ambadiky ny fakantsary. Niseho tao amin'ity fanadihadiana manaraka ity i Echo taorian'izay, izay fantatra ankehitriny amin'ny fanadihadiana mitondra ny lohateny hoe “Ny Fizaran-tantara Miisa Telo Momba An'i Echo”.
Ahitana ny Echo of the Elephants (1993), Echo of the Elephants: the next generation (1996) [ny taranaka manaraka] ary ny vao haingana indrindra, Echo of the Elephants: the final chapter (2005) [ny toko farany] ny Fizaran-tantara Miisa Telo Momba An'i Echo. Vao haingana, niseho tao anatin'ny horonantsary momba ny asan'ny mpanatontosa horonantsary fanadihadiana Martyn Colbeck, ihany koa i Echo izay mitondrany lohateny hoe An Eye for An Elephant.
Araka an'i Cynthia Moss, hisy fiantraikany lalina eo amin'ny fianakaviany ny fahalasanan'i Echo.
“Tsy misy amin'izy ireo, afa-tsy ny rahavaviny Ella, no nahafantatra mpitarika hafa ankoatra an'i Echo”
hoy i Cynthia Moss nampahatsiahy tao amin'ny fanambarana ho an'ny WildlifeDirect, sady navoaka ihany koa tao amin'ny tranonkala ATE. Hodinihan'ilay mpikaroka ny fomba hiatrehan'ireo elefanta ity tetezamita ity ao Amboseli, Kenya.
Nanan-danja lehibe teo amin'ny lafiny siansa i Echo, hoy ihany koa i Cynthia Moss
For us on the Amboseli Elephant Research Project she has been an invaluable research subject providing us with insights into elephant behavior, leadership, communication, social relations and intelligence”. But Echo was not just a research project. “She was more than that. She was a daily presence, almost a companion to all of us. She gave us joy and filled us with wonder
Ho anay ato anatin'ny tetikasa fikarohana momba ny elefanta eto Ambolesi, izy no iray amin'ireo nahavitana fikarohana sarobidy, ary nanampy anay tamin'ny fanamarihana maro momba ny fitondrantenan'ny elefanta, ny fahefana ao amin'ny vondrona, ny fifandraisana, ny fifandraisana ara-tsosialy sy ny faharanitan-tsaina “. Kanefa tsy natao fotsiny ho an'ny fikarohana i Echo. “Fa mihoatra noho izany izy. Teo hatrany izy isan'andro, namana ho an'ny ankamaroanay. Nanome anay fifaliana izy ary nanao izay nahatalanjona anay
Fahaverezana lehibe izany ho an'ireo rehetra izay nahafantatra an'i Echo. Nangataka ny mpamaky ao amin'ny bilaogy Baraza i Dr. Paula Kahumbu mba handrehitra labozia ho an'ity reniben'ny elefanta mahafinaritra ity. Niresaka momba ny fotoana niarahana tamin'i Echo nandritra ny fikarohana momba ny fifandraisan'ny elefanta amim-peo i Joyce Poole sy Peter Granli ao amin'ny bilaogin'izy ireo Elephant Voices.